Maxaa laga damacsan yahay email-ka cusub ee u dhexeen doona Kheyre iyo shacabka - Caasimada Online
Home Warar Maxaa laga damacsan yahay email-ka cusub ee u dhexeen doona Kheyre iyo...
Maxaa laga damacsan yahay email-ka cusub ee u dhexeen doona Kheyre iyo shacabka
Muqdisho (Caasimada Online) – Maamulka Xafiiska Ra’isul wasaaraha Xukuumada Somalia Xasan Kheyre ayaa soo bandhigay Email la sheegay inay kuwada xiriiri doonaan Ra’isul wasaaraha iyo Shacabka.
Emailkani cusub ayaa waxaa la sheegay in fariimaha lagu diro ay si toosa u gaarayaan Ra’isul wasaare Kheyre maadaama uu aad u yaryahay kulanka Shacabka iyo Ra’isul wasaaraha.
”Waxaan doonayaa inaan shacabka la wadaago aragtidooda si aan u helno talooyinka iyo fikraddaha shacabka Soomaaliyeed” ayaa lagu yiri qoraal kooban oo lagu daabacay barta uu Kheyre ku leeyahay Twitter-ka.
Kheyre ayaa Emailka u sameeyay si uu u helo dhibaatooyinka ay shacabka ka cawanayaan balse aan isaga la gaarsiin lagana qariyo.
Waxa uu sidoo kale rajo ka muujiyay in qoraalada loo soo marin doono Emailka ay waxbadan ka bedeli doonto shaqadiisa.